Booliska Talyaaniga ayaa baaraya eedeymo la xiriira imtixaan uu galay Luis Suarez ee dhinaca… – Hagaag.com
Posted on 23 Seteembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Mas’uuliyiinta Talyaaniga ayaa baarayaa eedeymo wax isdaba marin ah oo harreeyay imtixaan laga qaaday ciyaaryahan Luis Suarez oo ku saabsanaa in uu u qalmo in la siiyo dhalashada Talyaaniga ama in kale.
Luis Suarez ayaa imtixaankan laga qaaday toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ay soo baxeen warar sheegayo in uu doonayo in uu ku biiro kooxda ka dhisan Talyaaniga ee Juventus.
Xafiiska dacwad oogaha magaalada Perugia ee Talyaaniga iyo booliska ayaa sheegay inay baarayaan qaabka loo qaaday imtixaanka laga qaaday ciyaaryahanka ee uu ku doonayay in uu helo dhalashada.
Ilo wareedyo ka tirsan garsoorka ayaa wakaaladda wararka ee Talyaaniga u sheegay in Suarez kaligiisa uusan baaritaanka ku socon.
Waxaa jirtaa eedeyn ah in ciyaaryahanka uu horey u ogaa su’aalaha imtixaanka ka hor inta aanan looga qaadin jaamacadda Perugia, lagana heshiiyay natiijada ka hor inta aan gacanta laga saarin, sida laga soo xigtay bayaan kasoo baxay xafiiska dacwad oogaha magaalada bartamaha ku taalla ee Perugia.
Ciyaaryahankan u dhashay dalka Uruguay “Wuxuu aqoon u leeyahay inta aasaasiga ah ee luqadda Talyaaniga”
Shan kamid ah barayaasha jaamacadda ayaa haatan la baarayaa, mas’uuliyiinta waxay Talaadadii jaamacadda ka heleen dokumentiyo.
Jaamacadda Perugia oo ah halka uu imtixaanka ku galay ayaa beenisay in wax khalad ah uu dhacay.
“Markii imtixaanka la qaaday waxaa la raacay hannaanka hufnaanta iyo caddaaladda” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay jaamacadda.
Xaaska Suarez waxay kasoo jeedaa Talyaaniga, sidaas darteed, wuxuu qaadan karaa dhalashada Talyaaniga balse ninkan 33 jirka waa in uu ka gudbaa luqadda Talyaaniga oo imtixaan looga qaaday jaamacadda Perugia 17-kii bishan.